Banaan Baxyo Ka Bilaabmay Dalka Ethiopia, Tirada Dhimashada iyo Dhaawaca+Sababaha Keenay. |
Banaan Baxyo Ka Bilaabmay Dalka Ethiopia, Tirada Dhimashada iyo Dhaawaca+Sababaha Keenay.
Addisababa(GNN):-Saddex qof ayaa ku dhimatay dibadbaxyo rabshado wata oo ka dhacay Itoobiya halka tiro shacab ah ay ku dhaawaceen, sida saraakiil Ciidanka Booliska Itoobiya ay xaqiijiyeen.
Dibadbaxyada ayaa looga soo horjeeday ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed
Labo qof oo kamid ahaa dadkii dibadbaxyada ka dhigayay magaalada Adama ayaa lagu dilay halkaas halka hal qofna kalena uu ku dhintay magaalada bariga ku taal ee Harar, sida ay saraakiisha sheegayaan.
Halka saddex qof oo dibadbaxyaal ahna lagu dhaawacay magaalada Ambo oo dhacdo galbeed magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa.
Waxaa la xidhay waddooyinka ku yaal gobolka Oromiya iyo waddooyinka gala Addis Ababa.
Dhinaca kale Boqolaal taageerayaal ah ayaa maanta isugu soo ururay dibedda guriga Jawaar Mohamed oo ah nin u dhaqaaqa bulshada Oromada, oo ay ishayaan dowladda uu hoggaamiyo ra’iisul wasaare Abiy Ahmed.
Arrintan ayaa imanaysa maalin kadib markii ciidamada ammaanka ay hareereeyeen guriga Jawaar kadib markii ra’iisul wasaare Abiy Ahmed uu u digay “dadka haysta baasaboorada ajnabiga ah ee leh warbaahinta.”
Jawaar oo haysta baasaboor Mareykan ah ayaa leh warbaahinta Oromia Media Network.
Taageerayaasha oo boqol gaarayaa ayaa ayaga oo ku sugan dibedda guriga Jawaar ee caasimadda Addis-Ababa waxay ku qeylinayeen erayo ay ku taageerayaan isaga, islamarkaana ka dhan ah ra’iisul wasaare Abiy Ahmed.
In ka badan labaatan askari oo booliska federaalka ah ayaa habeenkii talaadada hareeyey gurigiisa, kuna qasbay ilaaladiisa inay guriga isaga tagaan.
Ma cadda sababta guriga Jawaar loo hareereeyey, hase yeeshee saacado ka hor tallaabadaas, Abiy Ahmed oo baarlamanka la hadlay ayaa isaga oo aan magac sheegin u digay dadka leh warbaahinta.
“Kuwa leh warbaahinta ee aan haysan baasaboorka Itoobiya, waxay jiraan labada dhinac. Marka ay nabad dhacdo halkan ayay joogaan, marka uu dhib dhacana halkaas.” Ayuu yidhi Abiy Ahmed.
“Waxaan isku daynay inaan u dulqaadanno. Hase yeeshee tani haddii ay waxyeeleyneyso nabadda iyo jiritaanka Itoobiya, haddii aad ku hadasho Amharic ama Oromiffa, midkee doontaba, tallaabo ayaan kaa qaadaynaa.” Ayuu yidhi Abiy Ahmed.
Amharic iyo Oromiffa waa labada luuqad ee ay kula kala hadlaan labada qowmiyad ee ugu dadka badan Itoobiya ee Amxaarada iyo Oromada.
Jawar oo aaminsan qadiyad aan rabshad wadan oo ah in Oromada mar walba kow tahay, ayaa Itoobiya kusoo laabtay bishii August ee sanadkii tagay, isaga oo kasoo tagay Mareykanka.
Addis Ababa Ethiopia Office